Semalt: Chii chinonzi SLL
SSL inomiririra kuchengetedzwa kwezvokuchengetedza. Zvinonzwika zvishoma zvouchenjeri, uye zvakanaka kufunga naizvozvo nokuti teknolojia iri kumashure iyo chaizvoizvo. Zvisinei, chirevo chakaripoteredza chiri nyore. Inoshanda kuburikidza nekuchengetedza dhenda yevatengi vanoshanyira webhusaiti. Sezvo data ichifambisa paIndaneti kumuridzi wevhareji, hapana kuudza uyo anoitora paanenge achifamba. Apo SSL iri kutamba, inovhara data yose kuitira kuti iyo chete yevaiti yevaiti uye browser yevashandi vanogona kuiverenga.
Ryan Johnson, Mutungamiri Mukuru Wekutsvaga Semalt , anotaura kuti chimwe chezvikonzero nei SSL yakakosha ndeyekuti zviri nyore kubvisa dhidhi pane internet. Kurwisa kwakadaro kunonzi munhu-mu-ari-pakati kurwisa. Kutsvakurudza kwakaratidza kuti zviri nyore kune vanotengesa kana vanhu vane chinangwa chakaipa chokubvisa webhuta. Vanogona kutora chinhu chero chipi zvacho kubva pane zvichemo zvekadhi rechikwereti kune ruzivo rwakanyorwa muhuwandu hwepeji.
Muzvokwadi, mawebsite akawanda anotarisana nemashoko anonyanyisa anotoshandisa shanduro yeSSL. Idzi ndidzo dzinoshandisa zvikwereti zvekwereti kuti dzigadzirise ruzivo, nokudaro kuisa ruzivo rwemuteereri pangozi. Inofanira kunge iri nzvimbo yekutarisa kwevanhu vanotarisa kuti vave yavo webhusaiti yavo. Kana iyo isina SSL technology iri panzvimbo, inofanirwa kuifunga kuitora iyo pakarepo. Zvakakoshawo kusanganisira teknolojia yeStrkey kunyange kana nzvimbo yacho isingashandisi mashoko ekodha yemakadhi. Pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvakapiwa izvi, kusanganisira nzira iyo Google inoshandisa nzvimbo dzine SSL.
Google Chrome uye SSL
Pakati pezvinyorwa zvinozivikanwa zvikuru, nhasi iGoogle Chrome..Pakutanga kwegore ra2017, mutsvaga akatanga kutarisa nzvimbo ne SSL encryption zvakasiyana. Kunze kwokungoratidzira chidhi pabhokisi rekero rewebhu, ikozvino zvinoita kuti vashandisi vatsinhire pairi kuti vaone mamwe mashoko. Kana sangano risina kuchengeteka, rinopa nyevero "Haisi Yakachengeteka" inyevera kuti inogona kutenga muenzi kana vachiramba vachitsvaga vasina kudzivirirwa. Inoshanda kune chero webhusaiti iyo inounganidza passwords kana chero ruzivo rwemari. Icho chirongwa neGoogle kuita kuti nyevero iyi ioneke kunyange kune mamwe maji.
Kana webhusaiti kana peji rewebhu risina SSL, ipapo Chrome ichazivisa vashanyi kuti nzvimbo yacho haina kuchengeteka iyo inogona kudzorera vazhinji vevashanyi. Izvo ndezvekuita kwayo pachako kuita izvi. Zvisinei, pane zvimwe zvikomborero zvekushandisa SSL:
Makomborero ekushandisa SSL
User Confidence. Vashandi vanonzwisisa kukosha kwekunyorwa kwechikonzero ndicho chikonzero nzvimbo yacho ichawedzera kuvimba kana ine SSL.
SEO. SSL ikozvino yakakosha mu SEO
Kukurumidza. Rinoshandisa purogiramu itsva yeHTTP inoreva kuti ine peji rinokurumidza kutakura.
kuchengetedzwa. Kunobatsira kuchengetedza ruzivo rwomuridzi nemushandi.
SSL Nhema Busting
Inodhura HTTPS. Let's Encrypt, uye CloudFlare vanozvipa pachena pamwe nedzimwe nzvimbo
HTTPS inononoka. Websites runokurumidza paunenge uri pane SSL
HTTPS ndeyekutengesa e-commerce. Pane kuchinja kukuru kunoshumira webhu rose
IP yakazvitsaurira. Hakuna chikonzero cheizvi pasinei nezvikomborero zvinowanikwa kubva kuIndaneti dzakatsaurirwa
Free SSL yakaseteka kudarika yakabhadharwa. Vanopa chiyero chakafanana chekuchengeteka asi vanosiyana nehuwandu hwezvinhu.
Mushure mekuisa cheS SSL chiiti, chengetedza kana pane zvipi zvayo zvakaputsika, zvimwe zvisiri izvo zvinoitika, 301 kurongedza, kuvapo kweRobots.txt, uye kana Google Search Console inoshanda. Nokuita izvi, inova nechokwadi chokuti mapeji ose ari ekugona kushanda nesimba Source .